विशेष दिनभर काम नगरे चुलोमा आगो बल्दैन किन जानु चुनावमा
Ujyaalo मगलवार, मंसिर १९, २०७४ ०५:०६:००
उदयपुर, मंसिर १८ – त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ११ को एउटा घरमा काम गर्दे गर्नुभएको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर –४, बगाहाकी श्रीदेवी चौधरीलाई तपाँईलाई चुनावको बारेमा थाहा छ ? भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘दिनभरी अर्काको ज्याला मजदुरी नगरी चुल्होमा आगो बल्दैन’ ।
चुनावमा जाने भोट माग्ने फुर्सद हामीलाई कहाँ छ र ? एकदिन काम नगरे घरमा रहेको ९ जनाको परिवार भोकले मर्छ चुनावमा भोट माग्न जाँदा कसैले पैसा दिँदैनन् । उल्टै आफ्नो पैसा खर्च हुन्छ । चुनावको बारेमा बुझ्न थाले दिनभर भोट माग्न हिँड्नु पर्दछ त्यसैले नबुझेकै राम्रो ।’
यसरी चुनावको बारेमा थाहा नपाउने श्रीदेवी मात्र हैनन्, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आउनुभएका त्रिनपा १३ का राजकुमार चौधरीको समस्या पनि उस्तै छ । दैनिक ८ सय ज्याला पाउने राजकुमार काम नगरी उम्मेदवारको कुरा सुन्न गए परिवार भोकै हुने बताउनुहुन्छ, ‘खेतीपातीको लागि एक चपरी जग्गा छैन । बालुवा नचाले, मजदुरी नगरे, अरुको ज्याला मजदुरी गर्न नगए चुल्होमा आगो बल्दैन ।’
दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावले उदयपुरमा माहोल छाएको छ । उज्यालो भएदेखि साँझसम्म चोकचोकमा, चिया पसल, गल्लीगल्ली, चौतारामा उम्मेदवार र पार्टीको चर्चा हुन्छ । तर दैनिक रुपमा ज्याला मजदुरी खाने परिवारलाई चुनावले छुन सकेको छैन ।
त्रियुगाको बगरमा गिट्टी चालेर घर फर्किएका दम्पत्ती चनिमाया बोट र खकन बोटलाई पनि चुनावको बारेमा थाहा छैन । ‘दिनभर बगरमा गिट्टी चाल्नु पर्छ, चुनावको बारेमा बुझ्ने समय छैन । घरमा ८ जनाको परिवार छ, दिनभर गिट्टी नचाले भोकै परिन्छ’, चुनावको बारेमा बुझ्नु भन्दा काम गर्दा फाइदा हुने भएकोले चुनावलाई वास्ता नगरेको बोट दम्पतीको भनाई छ ।
घर निर्माणमा सिमेन्ट मुछ्दै गरेकी लिला विकलाई पनि चुनावले छोएको छैन । एकल महिला लिलाको काँधमा २ छोराको जिम्मेवारी छ । बिहान बेलुकाको छाक टार्न उहाँको पेसा नै निर्माण मजदुरी हो ।
लीलाको एक छोराको मृगौला फेल भएको छ । दैनिक ४ सय आम्दानी गरी छोराको उपचार खर्च बिहान बेलुकाको छाक टार्ने लीलाको समस्या कुनै दलले नदेखेको गुनासो गर्नुहुन्छ, ‘सभा सम्मेलनमा हामीलाई लिन आउँछन् । धेरै मानिस देखाउनु पर्यो भने मजदुरको खोजी हुन्छ ।’ मजदुरको नाममा धेरैले फाइदा लिएको तर मजदुरको समस्या कसैले सम्बोधन नगरेको मजदुरहरुको दुखेसो छ ।